13 / 05 / 2021 03 / 06 / 2021 ယောရှုပုံပြင် 638 Views စာ0မှတ်ချက် 31088 နက်ရှိုင်းသောပင်လယ်သတ္တဝါများ, 43103 ပန့်ခ် Pirate BeatBox, 43114 ပန့်ခ် Pirate သင်္ဘော, 43115 အဆိုပါ Boombox, အချစ်ရယ်, အချစ်ရယ်, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, ဖန်ဆင်းရှင်, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego ဖန်တီးသူ, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Lego Vidiyo, reviews, အဆိုပါ LEGO Group, ဗီဒီယို
Lego VIDIYO ခုနှစ်ခုပင်လယ်ရေရွက်လွှင့် 43114 ပန့်ခ် Pirate သင်္ဘောအစောပိုင်း BeatBox ကိုပြည့်စုံစုံလင်သောဖျော်ဖြေမှုဇာတ်စင်တစ်ခုအတွက် Springboard အဖြစ်အသုံးပြုခြင်း။
43114 ပန့်ခ် Pirate သင်္ဘော ဖျော်ဖြေပွဲဇာတ်စင်၏ပေါင်းစပ်သို့တည်ဆောက် - နှင့် - နာမကိုအမှီအကြံပြုထားသည် - တစ် ဦး ပင်လယ်ဓားပြသင်္ဘောသည်၎င်း၏ထံမှယူပြီး 43103 ပန့်ခ် Pirate BeatBox။ ၎င်းသည်အလားအလာရှိသောဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အသစ်စက်စက်ဖြစ်သည် Lego VIDIYO စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အဆောက်အအုံအတွေ့အကြုံနှင့်ပျော်စရာနောက်ဆုံးမော်ဒယ်နှစ်ခုလုံးအတွက်လုံလောက်တဲ့ swashbuckling ကိုးကားချက်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ပြည့်စုံ၏။
theme: Lego VIDIYO အမည်သတ်မှတ်မည် - 43114 ပန့်ခ် Pirate သင်္ဘော ဖြန့်ချိ: ဇြန္လ 1, 2021
စျေးနှုန်း: £ 59.99 / $ 59.99 / € 69.99 အပိုင်းပိုင်း: 615 အသေးစားပုံများ: 3
အပိုင်း (၆၁၅) ခုသာပါဝင်သော်လည်း ၄၃၁၁၅ Punk Pirate Ship မှာသင်္ဘောတစ်စင်းအဖြစ်ပါ ၀ င်သည် VIDIYO's အကြီးဆုံးတည်ဆောက်သေးသည်။ ထိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင်၎င်းသည်ပြသရန်လာသောအခါ၎င်းသည်ကိုယ်ပိုင်ကိုင်ထားနိုင်ရုံသာမကသင်၏မျက်လုံးကိုဖမ်းရန်အရောင်အသွေးစုံလင်သည်။
သို့သော်တည်ဆောက်ပုံ၏ရှေ့ပိုင်းသည်တော်တော်လေးရိုးရှင်းပါသည် - အသေးစိတ်သည်စတီယာရင်ဘီးနှင့်အလွန်ကြီးမားသောစပီကာများထက် ကျော်လွန်၍ မကျယ်ပြန့်ပါ။ သို့သော်၎င်းသည်ဤနေရာတွင်အထင်ကြီးစရာမရှိပါဟုမဆိုလိုပါ။ ရိုးရှင်းပြီးအလွန်ထိရောက်သောအုတ်ဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားသော ဦး ခေါင်းခွံသည်ထိပ်သို့ ဦး တည်သွားသည်။
နောက်အပိုင်းကအရာဝတ္ထုအနည်းငယ်မြူဆိုင်းနေသောနေရာဖြစ်သည်။ အရောင်နှင့်အဖြူရောင်ကြမ်းပြင်ကြမ်းခင်း၊ အစိမ်းရောင် surfboard၊ ပီဇာနှင့်ရင်ဘတ်ကြားတွင်ဤအခန်းသည်မည်သည့်အခန်းဖြစ်သည်ကိုချက်ချင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါ။ စကားစပ်သည်ကပ္ပတိန်၏အခန်းတစ်ခန်းကိုအကြံပြုလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းဖြစ်နိုင်သည် VIDIYO ဆောင်ပုဒ်တစ်ခုလုံးအနေဖြင့် - အမှန်တကယ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့်တံဆိပ်ကပ်ရန်ခက်ခဲသည်။
အုတ်ဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားသော ဦး ခေါင်းခွံ၏နောက်ကွယ်တွင်ဆင်တူသည့်အရွယ်အစားအုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောငါးမန်းခေါင်းသည်၎င်းတွင်တွေ့ရသည့်အရာနှင့်ဆင်တူသည်။ 31088 နက်ရှိုင်းသောပင်လယ်သတ္တဝါများ။ ဦး ခေါင်းခွံ၏အဖြူရောင်သည်အခြားတောက်ပသောတည်ဆောက်မှုမှရနံ့သင်းပျံ့သောသန့်စင်ဆေးဖြစ်သော်လည်း၎င်းဒြပ်စင်နှစ်မျိုးကိုရှေ့ဘက်မှငါးမန်းများကိုပြသရန်လဲလှယ်နိုင်သည်။
43115 Punk Pirate Ship သည်အနည်းငယ်ပိုကြီးသည့်အလားတူအရောင်အရောင်ကိုရွေးချယ်သည် Lego VIDIYO အစုံ, 43115 အဆိုပါ Boombox, တက်ကြွအပြာနှင့်ပန်းရောင် tiled ပြီးနှင့်အတူ။ ဤအလွန်များပြားသောရောင်စုံချဉ်းကပ်မှုသည်ကလေးများကိုဆွဲဆောင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ သို့သော်အရွယ်ရောက်ပြီးသူစျေးကွက်၏အချို့အပိုင်းများကိုလည်းတွန်းထုတ်နိုင်သည်။ အခင်းအကျင်း၏ရည်ရွယ်ထားသောပရိသတ်အတွက်ကြီးမားသောကိစ္စမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ဤတည်ဆောက်မှုကိုသင်ချဉ်းကပ်စဉ်သတိရသင့်သည်။
ဒီအစုနှင့်အတူစီးနင်းဘို့သေးငယ်တဲ့ BeatBoxes ၏တ ဦး တည်း၏ချွတ် -Down ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအရာအတွက်အစစ်အမှန်ရည်ရွယ်ချက်မရှိပါ၊ ၎င်းနှင့်အတူပါ ၀ င်သော BeatBits ကိုပြသရန်နေရာတစ်ခုမဟုတ်သော်လည်းထိုအချိန်တွင်ပင်အကွက်ထဲတွင်ပုံနှိပ်ထားသော ၂ × ၂ အကွက် ၁၇ လုံးအနက် ၁၂ ခုအတွက်နေရာလွတ်သာရှိသည်။
43114 ပန့်ခ် Pirate သင်္ဘော Squid, Shark and Mermaid ဟုခေါ်သောအလွန်သေးငယ်သောပုံစံသုံးမျိုးဖြင့်လာသည်။ သူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုမရှိတဲ့တီထွင်မှုတွေရှိခဲ့ပေမယ့်သူတို့ဟာဒီစက်ရုပ်ရဲ့မီးမောင်းထိုးပြခြင်းပဲ။ Squid တွင်ရော်ဘာ headpiece ရှိပြီး torso, ခြေထောက်နှင့်လက်မောင်းပုံနှိပ်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။ Shark သည်ထူးခြားသောပုံနှိပ်ထားသောငါးမန်းခေါင်းကိုသွားကြီးများနှင့်သွားများနှင့်ပြသသည့်လျှာဖြင့်အက္ခရာအချို့ထည့်နိုင်သည်။
နောက်ဆုံးတော့အနည်းဆုံးတော့ Mermaid မှာကိုယ်ထည်နှင့်ခြေထောက်ပုံနှိပ်ခြင်းများစွာရှိပြီးလက်တွန်းဆေးထိုးခြင်းနှင့်ပြည့်စုံသည်။ လက်ပုံနှိပ်ခြင်းကိုမည်သည့်အသေးစားပုံစံဖြင့်မဆိုအမြဲတမ်းတန်ဖိုးထားလေ့ရှိသော်လည်းမြင်တွေ့ခဲသည် - VIDIYOတကယ့်အဖြစ်အပျက်တွေကတကယ့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပါ စုဆောင်းထားသောအသေးစား စီးရီး။
အကယ်၍ ဝေဖန်မှုတစ်ခုရှိပါက၎င်းသည်ရိုးရာလူ့ပင်လယ်ဓားပြအသေးအဖွဲပုံမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုအခြားလိမ့်မည် Lego အုပ်စုလိုက်မင်းကိုရောင်းမယ် 43103 ပန့်ခ် Pirate BeatBox?
43114 ပန့်ခ် Pirate သင်္ဘော ပေါင် ၅၉.၉၉ / ၅၉.၉၉ / ယူရို ၆၉.၉၉ ဖြင့်ရောင်းချထားပြီးစုစုပေါင်း ၆၁၅ စောင်ပါဝင်သည်။ တည်ဆောက်မှုသည်ကြီးမားပြီးခိုင်ခံ့သောကြောင့်၎င်းအတွက်စျေးနှုန်းကိုမျှတစေသည်arts နှင့်လုံး - သေနတ်သမား။ အတူတူထားရန်အလွန်ရိုးရှင်းသော်လည်း၊ တစ်နာရီခန့်ကြာအောင်တည်ဆောက်ရန်သက်တောင့်သက်သာရှိသောမော်ဒယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးယင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စျေးနှုန်းချိုသာစွာခံစားနိုင်သည်။
Is 43114 ပန့်ခ် Pirate သင်္ဘော အားလုံး VIDIYO ပျောက်နေပြီလား ဟုတ်ကဲ့ - ၎င်းသည်ဇာတ်ကောင်များနှင့်တက်ကြွသောအစုတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ဇာတ်ကောင်များပေးသောပျော်စရာနှင့်ထူးခြားသောဒီဇိုင်းများကိုစွန့်လွှတ်စရာမလိုဘဲယခင် minifigure-focus လုပ်ထားသောအဓိကဆောင်ပုဒ်အတွက်ရိုးရာအဆောက်အအုံအတွေ့အကြုံများစွာကိုယူဆောင်လာစေသည်။ သို့သော်တည်ဆောက်မှုအတွေ့အကြုံသည် p တွင်အလွန်အခြေခံကျပြီးကန့်သတ်ချက်ရှိသည်arts, နှင့်အစဉ်အလာပင်လယ်ဓားပြ၏မရှိခြင်းငိုကြွေးမြည်တမ်းသည်။
ဘာမှမစားသောပရိတ်သတ်များကြောင်းအချို့သောပုဒ်မခွဲသည် Lego သို့သော်ပင်လယ်ဓားပြများနှင့်ဆက်နွှယ်သောကြောင့်ရေငုပ်ရန်ခိုင်လုံသောအကြောင်းရှိသေးသည်။
LEGO VIDIYO 43114 Punk Pirate သင်္ဘောတည်ဆောက်ရန်ဘယ်လောက်ကြာမလဲ။
သင်တစ်နာရီအလိုတွင်အချိန်ဖြုန်းပါလိမ့်မည် 43114 ပန့်ခ် Pirate သင်္ဘောစတစ်ကာများမပါရှိသည့်ဆောက်လုပ်ရေးကိုဖြတ်ပြီးထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်တစ်ခုလုံးအပေါ်တော်တော်လေးရိုးရှင်းပါသည်။
LEGO VIDIYO 43114 Punk Pirate Ship ထဲမှာဘယ်လောက်အပိုင်းတွေရှိသလဲ။
43114 ပန့်ခ် Pirate သင်္ဘော ရေတွက်အိတ်ငါးခုကိုဖြတ်ပြီး 615 အပိုင်းပိုင်းပါရှိသည်။ သေးငယ်သောအကြီးအသေးများနှင့်အရောင်များစွာတို့အကြားကောင်းမွန်သောရောနှောမှုသည်ပုံမှန်စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည် VIDIYO.
LEGO VIDIYO 43114 Punk Pirate သင်္ဘောဘယ်လောက်ကြီးလဲ။
43114 ပန့်ခ် Pirate သင်္ဘော တည်ဆောက်မှု၏အောက်ခြေဆီသို့ ဦး တည်သောပိုကြီးသောအပိုင်းအစများ၏စုံတွဲတစ်တွဲကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်မျှမျှတတကြီးမားသည်။ နောက်ဆုံးမော်ဒယ်မှာ ၁၉ စင်တီမီတာ၊ ၂၄ စင်တီမီတာနှင့်အကျယ် ၁၈ စင်တီမီတာရှိသည်။
၄၃၁၁၄ Punk Pirate သင်္ဘောဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ။
43114 ပန့်ခ် Pirate သင်္ဘော ဇွန်လ ၁ ရက်တွင်ယူကေတွင်ပေါင် ၅၉.၉၉၊ ယူအက်စ်တွင်ဒေါ်လာ ၅၉.၉၉ နှင့်ဥရောပတွင်ယူရို ၆၉.၉၉ တို့ဖြင့်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။
← Lego Marvel Infinity Saga နွေရာသီ 2021 အစုံဖော်ပြခဲ့သည်
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောင်သော LEGO Thanos bigfig →